လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက် ပြန်လည်မဆုံတွေ့ကြတာ အကောင်းဆုံးပါ - Thadin
HomeRELATIONSHIPလမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက် ပြန်လည်မဆုံတွေ့ကြတာ အကောင်းဆုံးပါ
April 23, 2019 Admin Kwee RELATIONSHIP Comments Off on လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက် ပြန်လည်မဆုံတွေ့ကြတာ အကောင်းဆုံးပါ
သင်နဲ့သူချစ်ခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သက်တမ်းက ဘာမှထိုက်တန်တဲ့ အမှတ်တရမရှိခဲ့ရင် ဘာလို့ ပြန်ဆုံတွေ့ကြဦးမလဲ… ဒီလို ပြန်တွေ့ဆုံမှုက ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ သယ်ပေးလာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူရုပ်ကျပြီး ဘဝက သူထင်သလို ဖြစ်မနေခဲ့တာကို သင်မြင်တော့ သူနဲ့သင်လမ်းခွဲခဲ့တာ သိပ်ကံကောင်းတယ်လို့ သင်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပြီးနောက် သွားပါဦးမယ်နော်လို့ သင်နှုတ်ဆက်တော့ ကိုယ်ချင်းမစာနာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သင်အားနာမိပြန်တယ်။ ဒီလို ခံစားချက်က ခံစားရခက်တာမို့ ဘာလို့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြဦးမလဲ..
သူနဲ့ သင်ပြန်ဆုံတယ်။ သူက အောင်မြင်တိုးတက်လို့။ သင့်ဘဝက သင်ထင်သလို ဖြစ်မနေဘူး။ သူနဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက် မပျော်ရွှင်တဲ့သင့်ဘဝကို သူမြင်သွားလို့ သင့်ရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားစိတ်တွေ ဘယ်နားသွားထားရမှန်းမသိ ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဆို ဘာလို့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြဦးမလဲ…
သွေးသားထဲစွဲထင်နေတဲ့ အတိတ်က အမှတ်တရကြောင့် သူ့ကို သင်သတိရတတ်တယ်။ အခုချိန်မှာ သူဘယ်လိုများဖြစ်နေမလဲ၊ အဆင်ပြေရဲ့လားလို့လည်း သင်သိချင်တယ်။ အရင်တုန်းက အတူသွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာရောက်တိုင်း သင့်ရင် ခုန်မိတတ်သေးတယ်။ “သူ့ကိုဒီနေရာမှာ တွေ့မိဦးမလား” လို့ သင်တွေးတတ်တယ်။ တကယ်လို့ ဒီလိုခံစားချက်မျိုး ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးက ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ဘဝမှာ သူနဲ့ သင်ထပ်မဆုံတွေ့ပါနဲ့။
သူ့ကို သင်ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆုံတွေ့တော့ လှပတဲ့အတိတ်ကလည်း သင့်ရင်မှာ တစ်သက်လုံးကိန်းအောင်းတယ်။ တကယ်လို့ သူနဲ့ ပြန်ဆုံတွေ့ရင် ဒီလိုဖြစ်ချင်မှလည်း ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူက အရင်ကသူ မဟုတ်တော့ဘူး။ အရင်တုန်းက သူ့အသိဉာဏ်ပညာကို သင်သိပ်ကြိုက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုပြန်ဆုံတွေ့ချိန်မှာတော့ သူဟာ နည်းနည်းမှ တိုးတက်မလာတာကို သင်သိလိုက်တယ်။
တကယ်လို့ သူနဲ့ထပ်ပြန်ဆုံရင် သူ့ကိုမခွဲခွာစေတော့ဘူးလို့ သင်တွေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့မှာ သူ့ကို သင်တွေ့တော့ အင်း.. ဒီလောက်လည်း မဟုတ်တော့ပါလားလို့ သင်ခံစားရတယ်။ ဘယ်အချိန်ကတည်းက စခဲ့မှန်းမသိ.. သူ့အပေါ် သင်ခံစားချက်မဲ့နေခဲ့ပြီ။ သူ့ကို အရင်လို သင်ချစ်စိတ်မရှိတော့ပြီ။ ပြန်လည်တွေ့ဆုံပြီး သင်မျှော်လင့်ချက်မဲ့သွားခဲ့တယ်…. ဒါဟာ ကိုယ့်အတိတ်က လှပတဲ့အမှတ်တရကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါဟာ သိပ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်ပေါ့။
တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ ငါတို့လမ်းခွဲကြရရင် ဘယ်တော့ ဘယ်တော့ခါမှ ငါ့လက်ကျန်ဘဝမှာ နင့်နဲ့ပြန်လည်မဆုံကြေး…
သငျနဲ့သူခဈြခဲ့ကွတဲ့ ခဈြသကျတမျးက ဘာမှထိုကျတနျတဲ့ အမှတျတရမရှိခဲ့ရငျ ဘာလို့ ပွနျဆုံတှကွေ့ဦးမလဲ… ဒီလို ပွနျတှဆေုံ့မှုက ပြျောရှငျခွငျးတှေ သယျပေးလာနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
သူရုပျကပြွီး ဘဝက သူထငျသလို ဖွဈမနခေဲ့တာကို သငျမွငျတော့ သူနဲ့သငျလမျးခှဲခဲ့တာ သိပျကံကောငျးတယျလို့ သငျထငျတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူနဲ့ပွနျလညျဆုံတှပွေီ့းနောကျ သှားပါဦးမယျနျောလို့ သငျနှုတျဆကျတော့ ကိုယျခငျြးမစာနာတဲ့ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သငျအားနာမိပွနျတယျ။ ဒီလို ခံစားခကျြက ခံစားရခကျတာမို့ ဘာလို့ ပွနျလညျဆုံတှကွေ့ဦးမလဲ..
သူနဲ့ သငျပွနျဆုံတယျ။ သူက အောငျမွငျတိုးတကျလို့။ သငျ့ဘဝက သငျထငျသလို ဖွဈမနဘေူး။ သူနဲ့လမျးခှဲပွီးနောကျ မပြျောရှငျတဲ့သငျ့ဘဝကို သူမွငျသှားလို့ သငျ့ရဲ့ မိမိကိုယျကိုလေးစားစိတျတှေ ဘယျနားသှားထားရမှနျးမသိ ဖွဈတယျ။ ဒီလိုဆို ဘာလို့ ပွနျလညျဆုံတှကွေ့ဦးမလဲ…
သှေးသားထဲစှဲထငျနတေဲ့ အတိတျက အမှတျတရကွောငျ့ သူ့ကို သငျသတိရတတျတယျ။ အခုခြိနျမှာ သူဘယျလိုမြားဖွဈနမေလဲ၊ အဆငျပွရေဲ့လားလို့လညျး သငျသိခငျြတယျ။ အရငျတုနျးက အတူသှားခဲ့ဖူးတဲ့နရောရောကျတိုငျး သငျ့ရငျ ခုနျမိတတျသေးတယျ။ “သူ့ကိုဒီနရောမှာ တှမေိ့ဦးမလား” လို့ သငျတှေးတတျတယျ။ တကယျလို့ ဒီလိုခံစားခကျြမြိုး ရှိနသေေးတယျဆိုရငျ အကောငျးဆုံးက ကနျြရှိနသေေးတဲ့ဘဝမှာ သူနဲ့ သငျထပျမဆုံတှပေ့ါနဲ့။
သူ့ကို သငျဘယျတော့မှ ပွနျမဆုံတှတေ့ော့ လှပတဲ့အတိတျကလညျး သငျ့ရငျမှာ တဈသကျလုံးကိနျးအောငျးတယျ။ တကယျလို့ သူနဲ့ ပွနျဆုံတှရေ့ငျ ဒီလိုဖွဈခငျြမှလညျး ဖွဈလိမျ့မယျ။ သူက အရငျကသူ မဟုတျတော့ဘူး။ အရငျတုနျးက သူ့အသိဉာဏျပညာကို သငျသိပျကွိုကျခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုပွနျဆုံတှခြေိ့နျမှာတော့ သူဟာ နညျးနညျးမှ တိုးတကျမလာတာကို သငျသိလိုကျတယျ။
တကယျလို့ သူနဲ့ထပျပွနျဆုံရငျ သူ့ကိုမခှဲခှာစတေော့ဘူးလို့ သငျတှေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီကနမှေ့ာ သူ့ကို သငျတှတေ့ော့ အငျး.. ဒီလောကျလညျး မဟုတျတော့ပါလားလို့ သငျခံစားရတယျ။ ဘယျအခြိနျကတညျးက စခဲ့မှနျးမသိ.. သူ့အပျေါ သငျခံစားခကျြမဲ့နခေဲ့ပွီ။ သူ့ကို အရငျလို သငျခဈြစိတျမရှိတော့ပွီ။ ပွနျလညျတှဆေုံ့ပွီး သငျမြှျောလငျ့ခကျြမဲ့သှားခဲ့တယျ…. ဒါဟာ ကိုယျ့အတိတျက လှပတဲ့အမှတျတရကို သငျကိုယျတိုငျ ဖကျြဆီးပဈလိုကျတာပါပဲ။ ဒါဟာ သိပျဝမျးနညျးစရာကောငျးတဲ့ အဖွဈပေါ့။
တကယျလို့ တဈနနေ့မှေ့ာ ငါတို့လမျးခှဲကွရရငျ ဘယျတော့ ဘယျတော့ခါမှ ငါ့လကျကနျြဘဝမှာ နငျ့နဲ့ပွနျလညျမဆုံကွေး…
This Month : 41309
This Year : 236707
Total Users : 595731
Total views : 2736803